Galaxy S6 Review: Hordhac
Dib u eegista alaabta Tilifoonnada gacanta
by Faarax Sh
01 ee 09
Samsung hadda waa shirkad soo saare taleefan ee ugu sareeya dunida oo dhan, si kastaba ha ahaatee, dad badan ma ogaanayaan in dhawaan ay lumisay tufaaxa Apple - ay ku tartamayaan. Taasi waxay ugu wacnayd tirada yar ee iibka qalabkii ugu dambeeyay ee sannadkii hore, Galaxy S5, iyo Apple oo soo bandhigtay laba iPhone oo cusub oo leh bandhigyo waaweyn. The ugu weyn ee hoos u riix Galaxy S5 ahaa naqshad la'aanta iyo Samsung doorashooyinka xun xun; ma aysan dareemin qiimo dhan iyo gadaasha qalabka dhab ahaantii waxay u egtahay sida kubbadda golf (ama faashad).
Hadda, ha iga helin qalad. GS5 ma aheyn casriga xun, waxay ahayd qalab casri ah oo leh naqshad xumo iyo dareen raqiis ah oo tayo dhisaya. Iyo, taasi waa halka shirkada shirkada Kuuriya ay leedahay faa'iido. Qalabka flagship ee ka yimid OEMs kale waxay lahaayeen xaashi la mid ah, naqshad wanaagsan, iyo dhibic la mid ah ama qiimo ka hooseeya bixinta Samsung.
Sannadka 2015, Samsung waxay u baahnayd qalab casri ah, ma aha warshadaha casriga ah, laakiin waxay u dhigantaa nooca Galaxy; Halkii ay ka mid ahayd, waxay na siisay laba: Galaxy S6 iyo Galaxy S6 gees. Waxaan hadda dooneynaa inaan eegno Galaxy S6, iyo S6 gees ka mid ah qayb gooni ah.
02 ka mid ah 09
Aynu bilowno naqshadeynta. Galaxy S6 wuxuu leeyahay luqad naqshadaysan oo aan marnaba horay u arag maraakiibta Korean. Markii ugu horreysay abid, Samsung ayaa go'aansaday in aan la gashanayn caag ah maaddada dhismaha ee doorashada, halkii ay ku socotay dhismo dhoobo iyo quraarad oo dhan. Sida shirkad ahaan, waxay isticmaaleysaa qalab gaar ah oo qalabka ku shaqeeya, taas oo 50% ka xoog badan yahay birta casriga kale ee sare, iyo waxay ku taallaa muraayadda ugu adag ilaa taariikhda - Gorilla Glass 4 - labadaba dhinaca hore iyo gadaal casriga ah.
Anigu ma aan sameynin tijaabooyin isdabajoog ah ama xoqitaan ah Galaxy S6, laakiin waxaan isticmaalay qalabka iyada oo aan kiis laga soo bilaabo in ka badan hal bil oo hadda, waana wali xaalad aad u fiican oo aan lahayn xayiraad ku saabsan galaaska ama wax kasta oo khudrado ah qaabka birta. Illaa iyo hadda, qalabka cusub ayaa u muuqda mid degan, hase yeeshee, wakhtiga kaliya ayaa sheegi doona in GS6 ay ka dhaqso badan tahay kuwii horey u ahaa kuwii hore. Hal shay oo hubaal ah inkastoo, biraha cusub iyo quraaradaha birta cusub ay noqon doonaan kuwo aad ugu nugul dhibcaha, markaa waxaad u badan tahay in aad jabiso ama aad fariisid taleefankaaga haddii aad ka tagto, marka loo eego waxaad ku yeelan lahayd dhismo caag ah. Haddii aad casrigaaga hoos u dhigto sida badanaa waa inaad hubisaa, inaad u baahato inaad kiiska kudarto.
Dhaqdhaqaaqa biraha ah, oo lagu daro laba qaybood oo muraayad ah, wuxuu siinayaa muuqaal iyo dareemid naqshad aan ku haboonayn, taas oo ka dhigaysa aaladda si aad u raaxo leh. Sidoo kale, birta ayaa si kooban u soo jiitay labada dhinac ee qaab-dhismeedka kaas oo gacan ka geysanaya kordhinta qalabka qalabka. At 6.8mm iyo 138g, waa mid khafiif ah oo iftiin leh.
Laga soo bilaabo dhinaca hore, GS6 waxay u egtahay mid la mid ah madaxdeeda, qaar ka mid ah xitaa waxay isku khilaafaan midka kale. Muujinta shaashadda, waxaan heysanaa badhankeena guriga, badhanka barnaamijka riixitaanka, iyo badhanka dambe. Dhinaca shaashadda, waxaan leenahay wajigeena wajiga hore ee waji leh, waji iyo iftiinada iftiinka iftiinka, LED-ogeysiinta, iyo gambaleelaha hadalka. Dhanka dambe, waxaan leenahay qalabkayaga ugu muhiimsan ee kamaradaha, dareemaha wadnaha, iyo nalalka LED. Maaddaama ay naqshad noocaan oo kale ah, qaniinyada kamaradaha kamaradu waxay u muuqdaan waxoogaa yar, waxayna u nugul yihiin inay xoqdaan oo ay ku dhacaan dhibicda.
Marka la eego meeleynta dekadda iyo badhanka, Samsung waxay sameysay isbeddello waawayn halkan. Nidaamka dhagaha iyo qalabka dhegeysiga ayaa loo wareejiyey qaybta qalabka. Hadda waxaa jira labo gaar ah oo khafiif ah, kuwaas oo loo rogay xoogaa ka sarreeya qaabka caadiga ah ee caadiga ah, sidaasi darteed dadku si khaas ah uma riixaan badhanka awoodda marka ay ku cadaadiyaan furayaasha mugga iyo kuwa kale. Iyo, in shirkad siiso badhanka awoodda leh, OEM waxay u wareegtay SIM-ga oo ka hooseysa albaabka batoonka ilaa dhinaca midig ee qaabka. Inkastoo aan ka hadleyno badhannada, mugga iyo awoodda awoodda waxay leeyihiin dareemo adag oo adag, iyaga ma dareemayaan dareen sida jiilalkii hore.
Ka hor inta uusan Galaxy S6, Samsung marwalba waxa uu ka shaqeynayey istaraatiijiyad qaab-dhismeed ah, waxa uu bixinayaa naqshadeynta muuqaalada; waqtigan waxa ay sameyneysaa ka soo horjeeda. Si loo dhamaystiro naqshaddan geesinimada leh, Samsung waa inuu dhowr waxyaabood oo waaweyn u sameeyo. Tusaale ahaan, daboolka batari hadda lama sii deyn karo, batteriga ma ahan mid la bedeli karo, ma jiro boos dhexdhexaad ah oo microSD ah oo loo heli karo kaydinta la ballaadhiyo, iyo sidoo kale shahaadada biyaha iyo boodhka IP67-ka ayaa sidoo kale laga saaray - taasoo markii ugu horeysay sameysay Galaxy S5. Si loo magdhabo kaararka MicroSD iyo samaynta batariga aan aheyn kuwa la beddeli karo, shirkadda Kuuriyaanka waxay ku dartay sifooyin kale duwan, laakiin ma ahan kuwo bedelaad u ah kuwa laga saaray (Waxaan sharxi doonaa sifooyinkaas hoos u dhigaya dib u eegista).
Sida naqshadeynta, Samsung ayaa sidoo kale tijaabiyey shaqada rinjiga ee aaladda alaabeed. Galaxy S6 waxay ku timaadaa noocyo kala duwan oo dahabi ah oo midabkiisu yahay - White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum iyo Blue Topaz - kaas oo si quruxsan u dhameeya naqshadeynta, oo si fudud u eeg muuqaalka. Muraayadda waxay ku jirtaa lakab midab gaar ah oo micro-optic ah kaas oo siinaya midabka awood u wareegaya. Tusaale ahaan, iyadoo ku xiran hadba sida iftiinku u iftiimayo qalabka, kala duwanaanshaha Black Sapphire mararka qaarkood waxay u egtahay madow, mararka qaar buluug, mararka qaarkood xitaa guduud. Waxaan u maleynayaa inay u muuqato qurux qurxoon iyo mid gaar ah, maaha wax la mid ah sidii aan horay u aragay casriga ah.
Galaxy S6 oo ciyaaraya 5.1-inch Super AMOLED bandhig, dhab ahaanba cabbirka isku midka ah ee horay u ahaa, laakiin maaha hal guddi. Bandhiga cusub wuxuu kufaraa xayeysiin Quad HD (2560x1440), taas oo micnaheedu yahay in uu leeyahay 78% ka badan pixels marka loo eego Full HD (1920x1080). Waxaan ogahay in qaar ka mid ah aad horey u soo qaadatay xisaabta, laakiin haddii aadan haysan, taasi waa in ka badan 3.2 million pixels oo ah gacmahayaga. Taasi waa pixels badan! Isku dhafida qiyaas sarre leh oo leh guddi 5.1-inch ayaa siinaya cufnaanta pixel 577ppi - ilaa hadda, ugu sarraysa dunida oo idil. Hadda waxaa laga yaabaa inaad ka fikirto, ma Note 4 iyo Galaxy S5 LTE-A sidoo kale ka mid ah bandhig doodda QHD? Waad saxsan tahay, waxay sameeyeen. Hase yeeshee, xusuusta 4 ayaa ku duubay shaashad 5.7-inch oo weyn, oo u dhiganta cufka 518ppi, taas oo ah wax yar, marka loo eego GS6. Iyo, GS6 ayaa isticmaalaya guddi aad u fiican oo ka cusub Galaxy S5 LTE-A.
Haddii aad tahay nooc ka mid ah dadka badan oo habeenkii akhristaya akhristahaaga ka hor intaadan aadin hurdo, waxaad ku farxi doontaa inaad maqasho in shirkadda Korean ee ugu dambeysay ee tiknoolajiyada AMOLED ay ka muuqato Super Dim Mode taas oo iftiimisay hoos u dhac 2 Cd / تەدبىر, taas oo macnaheedu yahay inaad hadda si sahlan u akhri kartid jadwalka taariikhdaada ama maqaal ku yaala website aan adigoo indhahaaga ku haynin goobaha mugdiga ah. Sida shirkadu leeyahay Habka Dareemida ee Habeenka (Super Dimension Mode) habeenkii, waxa uu leeyahay qaab Habka Super Bright ah maalinta. Hase yeeshee, gacantaada ma sameyn kartid, maaddaama loogu talagalay dibedda oo aad u iftiiminaya isticmaalka joogtada ah ee gudaha. Sidoo kale, ma shaqeyn doonto haddii aad gacanta ku dhigtay iftiinka bandhigga, waa inaad isticmaashaa dhalaalid si aad u iftiimiso muuqaalkan gaarka ah si aad u shaqeyso, ka dibna si toos ah ayuu u kicin doonaa.
Intaa waxaa dheer, Samsung ayaa u oggolaanaya in uu isticmaalo in uu casriyeeyo midabada bandhigga - hoostaada - sida ay u kala jeceshahay shakhsi ahaaneed. Waxaa jira wadar ahaan afar qaab oo shaashadda ah: Bandhig qalabeed, shaashad AMOLED, sawir AMOLED iyo aasaasiga ah. By default, qaabka shaashadda waxaa lagu qeexay Adaptive display, taas oo si toos ah u-gashaa midabka midabka, saturation, iyo fiiqan ee bandhigga. Si kastaba ha ahaatee, ma aha 100% midab sax ah; waa tad aad u sarreeya. Hadda, ma dhahayo waxoogaa arin ah waa mid xun, aniga shakhsiyan waan jecelyahay, macaamiisha badankooduna sidoo kale way sameeyn karaan sababtoo ah taasi waxay muujinaysaa muuqaalka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad tahay nooca qof ee jecel midabkiisa midab-dhab ah, waxaa laga yaabaa inaad tahay sawir qaade xirfad leh, ka dibna si fudud u beddel nuucyada midabka ee aasaasiga ah, oo aad dahab ah tahay.
Daawashada nooc kasta oo ka mid ah tusaalahan AMOLED ayaa si fudud u qaadanaya neefta. Muuqaalku waa mid fiiqan, wuxuu leeyahay muuqaallo muuqaal leh oo aan muuqaal lahayn oo aan midab lahayn, oo soo saaro madow qoto dheer, dhalaalaya dhalaalaya iyo midabyo jilicsan. Samsung ayaa si dhab ah u dhigay bandhigga casriga ah ee adduunka ugu wanaagsan, mudadaas.
Software-ka marnaba ma aheyn mid ku habboon Samsung, laakiin waa dhinaca ugu muhiimsan ee smartphone. Waqtigan xaadirka ah, muhiimada ugu weyn ee soo saaraha Korjoogaha ayaa ahaa in la sameeyo miisaan iyo sahlan. Dhab ahaantii waxa ay ka fikirtay wax walba, oo waxay ka dhistay dhulka, sidaas awgeed magaca cod-bixiyaha: Project Zero.
Waxa ugu horreeya ee aad ku soo baxdo si aad u hesho khibradaada ku saabsan bandhiggaaga cusub ee Galaxy S6 waa aasaaska aasaasiga ah, waayo-aragnimada user-ka waa cajiib. Shirkadaha xakamaynaya Android ayaa sida caadiga ah marnaba helin xaqaan, sababtoo ah waa isku dar ah saddexda qaab-dhismeed: goobaha qalabka muhiimka ah, adeegyada Google, iyo qaababka OEM iyo adeegyadooda, marka la isku daro hal gelin, khibradda isticmaalka. Si kastaba ha ahaatee, shirkadda Kuuriya ayaa ugu dambayntii heshay; adoo dooranaya luqaddaada, dooranaya shabakada Wi-Fi, sameynta farahaaga, si aad u saxiixdo xisaabta Google iyo Samsung (oo aad hadda ku gali karto koontadaada Google), waa wax aan fiicnayn. Intaa waxaa dheer, Waxa kale oo ay u ogolaaneysaa user si loo soo celiyo macluumaadka muhiimka ah - sida log log, fariimaha, wallpaper, iwm - ka soo qalabkii hore ee Galaxy si ay u cusub, iyada oo la isticmaalayo xisaabta Samsung.
Aragtida guud iyo dareemida interface ayaa weli aad u la mid ah midka laga helo Galaxy S5 iyo Xusuusta 4aad ee socodsiiya cusbooneysiinta Lollipop cusub, taasina waa mid la fahmi karo. Samsung waxay leedahay suuq aad u weyn, isbeddel weyn oo u dhexeeya interface-ka ayaa ka dhalan doona curin waxbarasho oo hor leh oo loogu talagalay macaamiishii hore u cusbooneysiiyay amniga cusub. Si daacadnimo ah, dhexdhexaadinta isticmaalaha Kuuriya ayaa marna aheyn mid xun, gaar ahaan ka dib markii Lollipop lagu hagaajiyo. Waxay u baahnaatay dhowr jeer oo halkan ah iyo halkaa, oo ay tahay in ay soo xaaqaan nadiifiye xirfad leh. Iyo, ugu danbeyntii waxay heshay daaweynta iyo dareenka ay u qalantay.
Si kor loogu qaado waayo-aragnimada isticmaale, Samsung waxa uu isticmaalayaa Material Design-esque, flat, midabka midab leh leh iskudhaf, dabeecadaha dabiiciga ah. Shirkadaha shirkadaha gaarka loo leeyahay waxay heleen naqshad dhammeystiran, sidoo kale waxay isticmaalaan fududahay isticmaalka waxayna si fudud u egyihiin farqiga, gaar ahaan UI-da cusub ee ku salaysan kaarka caafimaadka ee S Health. Waxyaabaha kaliya ee dhibta ku saabsan iyaga ayaa ah in qaar ka mid ah barnaamijyadooda ay buuxsamaan oo ay qariyaan xaaladda barbaarinta, taas oo abuuraysa is-khilaaf iyo khalkhal galin waayo-aragnimo user.
Intaa waxaa dheer, injineerada Samsung ayaa bedelay astaanta ciriiriga leh qoraal cad oo sax ah; saaro fursado aan loo baahnayn oo ka imanaya miiska iyo goobaha; oo hoos u dhigtay tirada nidaam aan faa'iido lahayn oo macnaheedu yahay qofku helo ka hor inta dhabta ah wax waxtar leh. Waxaa intaa dheer, isticmaalka animations oo dhan OS ka dhigaya software dareemaya xiran oo nool. Sidoo kale waxaan jecelahay sida saacadaha iyo barnaamijka jadwalku u casriyeynayo waqtiga dhabta ah ee waqtiga dhabta ah iyo taariikhda; ka qaybqaataan noolasha nidaamka.
Aan ka wada hadalnay bloatware khiyaanada hadda. Inta badan way ka baxday, qaar ka mid ah waxay halkan joogaan, waxaana jira dhowr waxyaalood oo cusub. Mashiinka OS-da hadda wuu ka madax bannaan yahay dhammaan xarumaha Samsung, inta badan qaababka gimmicky, iyo shirkadaha gaarka ah ee shirkadda ee shirkadda - marka laga reebo S Voice, S Health Plan iyo S Planner. Si kastaba ha noqotee, haddii ay jiraan barnaamijka C-ga oo aad si joogto ah u isticmaasho, waxaad weli ka soo qaadan kartaa dukaanka Galaxy App. Wareegga daroogada ayaa weli jirta, halka ay joogaan halkan, sababtoo ah waa dakhliga soo gala Samsung. Markuu dhihi lahaa, haddii aad kaliya iibsato aaladaha aan la weecin (SIM free), uma baahnid inaad ka welwesho taas. Si aad wax uga beddesho si aad u saarto barnaamijyadooda aan faa'iido lahayn, shirkadda waxay hadda ku dallacaysaa qaar ka mid ah codsiyada Microsoft - OneDrive, OneNote, iyo Skype - qalabkeeda; mar labaad dakhliga soo gala Samsung.
Nasiib darro, markii ay ka saareen waxyaabo aan loo baahnayn, injineerku wax yar baa la qaaday oo laga saaray qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah. Tusaale ahaan, habka hal-wareejinta iyo Qalabka Gaari la'aanta mar dambe ma jiro, ma beddeli karo aragtida xarumahayga si tab ama ikhtiyaar ikhtiyaarka ah, ma awoodi karo inaan aragto muuqaalka pop-up, ma jirto goob loogu talagalay muraayada screen - kaliya isbeddel, iyo, illaa iyo markii aan helay casriyeynta Android 5.1.1, ma xitaa xitaa aan kala saari karin barnaamijyadeyda. Iyadoo wali la jajabiyay, madaama mar kasta oo codsi cusub la dhejiyo, waxay tagtaa bogga ugu dambeeya ee qalabka app. Sidaa darteed mar kasta oo aan ku rakibo codsi cusub, waa inaan ku cadaadiyaa Youtube-ka si aan u kala soocno arjiga khaaska ah.
Daaqada Multi-Window, Samsung ee muuqaalka badan ee howlaha kala duwan ayaa si aad ah loo hagaajiyay. Si aad u soo gasho, halkii aad ku riixi lahayd badhanka danbe, waa inaan hadda dheereynaa badhanka barnaamijyada dhowaan. Markii hore, markaad dhaqaajisay muuqaal badan oo daaqad ah, farshaxan farabadan oo loo isticmaalo in lagu soo bandhigo dhinaca muuqaalka laga bilaabo halka aad ka dooran karto barnaamijyada aad rabto in ay ku ordo qaabka shaashadda. Hada, halkii laga heli lahaa farshaxan caydhin leh, shaashadda lafteedu waxay u kala baxaysaa laba qaybood, hal qayb oo muujinaya dhammaan codsiyada taageerada (waxaad sidoo kale dooran kartaa codsi kaas oo horay u orday oo ka soo jeeda qowmiyadda), qaybta kalena bannaan oo sugaya inaad doorato appka ugu horeeya ee screen-screen. Waxaan marwalba jeclaan lahaa fikradda ka dambeysa muuqaalka Multi-Window ee Samsung, iyo hadda waa ka sii fiican. Waa mid deg deg ah, jawaab leh, oo dib u qaabeynaya dhammaan codsiyada taageeraya si fiican. Haddii aad u maleyneyso inaad tahay xirfadle badan oo ku shaqeynaya oo aad jeclaan lahayd inaad ku shaqeyso in ka badan laba barnaamijyo markasta, Shirkadda Korjoogtada ee Korjoogta shirkadda Korjoogga ayaa ku taal. Muuqaalka Pop-up wuxuu u ogolaanayaa in uu isticmaalo in ka badan laba codsiyo isla markiiba, si kastaba ha ahaatee, marka uu gaaro xadka xajmiga, wuxuu bilaabi doonaa inuu xiro barnaamijyada si toos ah - in badan oo ka dambeeya maareynta RAM ka dib.
Intaa waxaa dheer, Samsung waxay ku dartay Maareey cusub oo casriga ah kaas oo bixinaya guudmar ku saabsan xaaladda batroolka, kaydinta, RAM, iyo nidaamka ammaanka. Qeybta batterigu waxay kuu oggolaaneysaa inaad la socoto tirakoobka batroolka oo u suurogeliso habka tamarta badbaadinta Si loo kaydiyo iyo RAM, Samsung ayaa iskaashi la leh Master Master, waxaad nadiifin kartaa faylasha aan loo baahnayn iyo joojiyaan codsiyada ka ordaya asalka ah. Nadiifinta feylasha qashinka waa faa'iido leh, joojinta nidaamyada asalka ah waa waxyeello. Shirkadda Kuuriya ayaa sidoo kale la shaqaysa McAfee si ay u sugto amniga qalabka, laakiin maaha mid faa'iido leh maadaama kaliya ay u baahato si xun u adeegsiga, taas oo aad tahay qalab aad u badan tahay in la isku duro. Si daacadnimo ah, waxaan kaliya adeegsaday app tan mar, maalinta aan helay casriga ah laftiisa, ka dibna waxaan illowday in xataa jirey. Sidoo kale waxay u badan tahay inaad ku dhacdo, markaa ha ka welwelin wax badan.
Mawduucyada, Dareenka Fingerprint
Haa, waad akhridaa taas. Mawduucyada. Mowduucyada TouchWiz. Giant Kuuriyaanka ayaa macaamiisheeda siinaya karti u leh inay si dhab ah u samaystaan ​​Galaxy S6, iyaga oo keenaya mootada mawduuca, taasoo ka dhigtay markii ugu horeysay ee shirkadda Galaxy A, si ay u noqoto casriga ugu dambeeya ee casriga ah. Iyo, ma aha oo kaliya ku saabsan beddelayo calaamadaha iyo wallpaper, waxaan ka hadlayaa habeynta buuxda oo buuxa. Tusaale ahaan, haddii aad codsanayso mawduuc wuxuu macnaheedu noqon doonaa dhammaan nidaamka hawlgalka, laga bilaabo kumbuyuutarka, dhawaaqyada, qulqulka, muuqaalada, wallpapers, si ay u dhexgalaan Samsung ee codsiyada gaarka ah. Mashiinka mawduuca ee Samsung ayaa macno ahaan u qaabeynaya nidaamka xididdadiisa, marka laga reebo shaashadda boot. Waxa kaliya ee qaldan ayaa ah in mar kasta oo aan ku dabaqo mawduucyada nidaamka, waxay hoos u dhigtaa casriga, wax kasta oo bilawga la galo, waxayna qaadataa ugu yaraan dhowr daqiiqo ilaa nidaamku ugu danbeyn hoos u dhaco. Caqabada Pro: Si looga fogaado lagula xiriiro, reboot Galaxy S6 ka dib markaad codsanayso mawduuc.
By default, Galaxy S6 kaliya waxay la socdaan mawduuca TouchWiz mawduuca, iyo leh meel ka mid ah laba mawduucyada la soo bixi karo: Pink iyo Space. Ha welwelin, waxaad heli kartaa noocyo kala duwan oo badan oo ka mid ah seddexda mawduucyada, thanks to Samsung si ay u kobciyaan dukaanka oo gebi ahaanba loogu talagalay mawduucyada. Waxaa intaa dheer, shirkadda Kuuriya waxay furatay mashiinkooda moodada SDK u soo dirtay horumarinta xisbiyada 3aad si ay u abuuraan mawduucyo gaar ah, oo u gudbiyaan dukaanka mawduuca.
Ka hadlida habeynta, dadka isticmaala waxay sidoo kale baddali karaan qaabka looqooyo ee guryaha loo yaqaan "4x5 ama 5x5" grid, taas oo u oggolaan doonta inay ku haboon yihiin widget-yo iyo barnaamijyada gaaban ee hal bog. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in la yareeyo tirada guud ee bogagga guryaha ku yaala shaashadooda, taas oo micnaheedu yahay tirtiris yar. Waxa aan jeclaan lahayn oo ku saabsan qaabkan gaarka ah waa inuusan u qadarin xajmigaaga xayeysiisyada xayeysiisyada ee cabbiraadda app, si kastaba ha noqotee qaabka qaabka aad dooratid, khariidadda appku waxay ku jirtaa 4x5. Samsung ayaa sidoo kale soo bandhigtay saameyn cusub oo muraayadda ah, oo loo yaqaan 'Parallax Effect in iOS', taas oo soo saarta xogta meelo badan oo ka mid ah dareemayaasha sida xawaaraha koromoolaha, gyroscope iyo wareega, iyo si toos ah u dhaqaajiya wallpaper. Waxay abuurtaa qoto dheer oo qoto dheer oo ku saabsan xayeysiisyada guryaha, waxay u simi doontaa waraaqaha derbiga iyo qulqulka iyo calaamadaha laba lakabyo kala duwan, sidaas darteed calaamadaha iyo jaantusyada waxay u egyihiin haddii ay ku dul muuqanayaan dusha sare ee wallpaper. Waan jecelay muuqaalkan iPad-kayga iyo had iyo jeer waxa uu doonayay in aan casriga ah ee Android, hadda waxaan ugu dambeyntii leeyahay.
Galaxy S5 wuxuu ahaa Samsung qalabkii ugu horreeyay ee lagu dhex galo sawirka fingerprint, laakiin waxa uu ahaa dareemo ku salaysan qaab kaas oo ubaahan inuu isticmaalo inuu ku dhejiyo farta oo dhan farta, laga bilaabo saldhig ilaa caarada, oo ka soo baxda furaha guriga si loo diiwaangeliyo faraha si sax ah. Hirgelinta ma ahan mid aad u weyn, oo sababay niyadjab badan isticmaalaha mar kasta oo uusan dareemuhu si fiican u garanayn faraha.
Halka Galaxy S6, scan farriin ah ayaa weli la dhex gelinayaa badhanka guriga, si kastaba ha ahaatee, waqtigan gobalada Kuuriya ayaa isticmaalaya dareemo ku salaysan taabasho, taas oo aad ugu dhow sida AppleID ee TouchID on qalabkan iOS. Uma baahnid inaad fartaada u dhigto xagal qaas ah si aad u hesho shaqo, wuxuu ka shaqeeyaa xag kasta. Si saxan u fiican, Samsung ayaa sidoo kale waxoogaa kor u kacay baaxadda guriga. Shirkaddu waxay ugu dambeyntii heshay scanner sawir sax ah waqtigaan, Waa horumar weyn oo ku saabsan jiilka ugu dambeeya, waa wax cajiib ah.
Marka la eego software-ka, Samsung ayaa dib u soo celisay dhamaan sifooyinka miraha ee qalabka calaamada hore ee Galaxy S6, oo ay ka mid yihiin faraha faraha, shabakadda internetka, xaqiijinta koontada Samsung, habka gaarka ah, iyo aqoonsiga PayPal. Waxaa intaa dheer, waxay la shaqayn doontaa Samsung adeegga Samsung Paying ee soo socda.
06 ka mid ah 09
Hantidhowrka casriga ah ee Samsung ayaa markasta qaatay sawirro cajiib ah iyo fiidiyowyo, si kastaba ha ahaatee, Galaxy S6 waxay u qaadataa heerka xiga, labadaba, marka la eego hardware iyo software. Qalabka wuxuu ku yaalaa 16 megapixel dareemada gawaarida gadaasha oo leh waji furid ah f / 1.9, OIS (muraayad-sawir-xasileyn), Auto Real Time HDR, shaashadda raadinta autofocus, duubista 4K ee muuqaalka, iyo tiknoolojiyada hababka tusaale ahaan Auto, Pro, Tallaalka Virtual, Fikradda xulashada, Dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, Dhaqdhaqaaq deg deg ah, iyo waxyaabo kale oo badan oo la soo dejin karo. Inta badan hababka isdaba-joogga ayaa ku jiray Galaxy S5, si kastaba ha ahaatee, qaabka Pro waa mid gebi ahaanba cusub oo gaar u ah Galaxy S6. Bal qiyaas qiyaasta dareenka ISO, qiimaha saamiga, dheelitirka cad, dhererka xajmiga, iyo midabka midabka, taasi waa sida dhabta ah qaabka Pro-ga u bixiyaa rasaastaha, waana wax cajiib ah. On qalabka hore ee Galaxy, waxaan si adag u isticmaali jiray si kasta oo noocyada toogashada marka laga reebo Auto, laakiin hadda waxaan dareemayaa isticmaalaya habka Pro habka marar badan. Waxaa intaa dheer, waxaa jira dareen cusub oo casri ah oo la dhisay oo loo isticmaalo in lagu ogaado dheelitirka cad.
Samsung ayaa horumarisay interface interface iyada oo si fudud u fududeyneysa, dhammaan kantaroolka kamaraduhu hadda waa kuwa horay u ah isticmaalaha, mar dambe uma baahna in la foorarsado hareeraha adigoo isticmaalaya qaabka, koontaroolayaasha ayaa sidoo kale lagu calaamadiyaa sidoo kale Aqoonsiga. Waxaa intaa dheer, app kamaradaha waxaa lagu heli karaa adigoo laba-laabaya barta guriga iyo waxaad ku qabsan kartaa daqiiqad ka yar wax ka yar labaad, Kalluumeysiga Kuuriya wuxuu awood u leeyahay in uu gaaro xajmaddaan adigoo sii haynaya barnaamijka mar walba si joogta ah - marna looma dilo. Hadda, taasi waa waxa uu leeyahay Samsung, laakiin waxaa sabab u ah xakamaynta maamulka RAM, waa la dilaa oo mararka qaar waxay qaadataa da 'u ah in ay ku dhajiyaan. Si kastaba ha noqotee, mar markaasi waa mid go'an, waa inaad awood u yeelatid inaad furto barnaamijka oo sawir ku qaadato 0.7 ilbiriqsi, sida ku xayeysiiso.
Quality-smart, Galaxy S6 wuxuu leeyahay mid ka mid ah kamaradaha ugu wanaagsan ee casriga ah, waa wax aan caadi ahayn. Iyo, taasi badanaaba waxaa sabab u ah furfurnaanta hoose ee muraayada iyo dib u hagaajinta dib u hagaajinta. Faa'iidada f / 1.9 fareebka, iftiin badan ayaa galaya lenska oo soo saara sawir aad u iftiin leh, sawir yar yar leh oo leh midabyo hodan ah iyo mid qoto dheer oo baaxad leh, gaar ahaan xaaladaha hooseeya. Isagoo ka hadlaya midabada, shirkadda dib u dhiska waxay kor u qaadeysaa farqiga u yaryar, lakiin ma ahan wax weyn oo heshiis ah waana runtii ku faraxsan yahay isha. Sidoo kale, runtii waxaan jeclahay sida ay u fududahay in la badalo soo-gaadhista, halka diiradda saaraya sheyga - muuqaal laga soo qaaday Ios. Real-time HDR sidoo kale waa qaab cusub oo cusub, oo ku xiran iftiinka iftiinka, wuxuu si toos ah u awood u siin karaa ama naafan karaa HDR wuxuuna siinayaa muuqaal nool oo saameyn ah ka hor inta aan la qaadan sawirka dhabta ah, oo runtii wuxuu gacan ka geysanayaa in uu iftiiminayo goob naladdiisu yar tahay. Xaaladaha yar-yar, waxaan dareemay midabada in ay ku jirto dhinaca huruudka ah, laakiin si kastaba ha ahaatee, ma ahan mid xun, iyadoo la tixgelinayo heerka qaylada.
Sida sawirada, qalabku wuxuu soo saaraa fiidiyo cajiib ah isla markaana leh qawaaniin badan oo lagu doorto, tusaale ahaan 4K (3840x2160, 30FPS, 48MB / s), Full HD (1920x1080, 60FPS, 28MB / s), Full HD (1920x1080, 30FPS , 17MB / s), HD (1280x720, 30FPS, 12MB / s), iyo in ka badan. Waxay sidoo kale ku dili kartaa fiidiyoow gaaban oo gaaban oo ku socda 720p HD at 120FPS (48MB / s). Mid ka mid ah waxyaalihii aad ii riyaaqay ayaa ahaa feejignaanta autofocus intii lagu duubay fiidiyowga, dareenka ayaa si dhakhso ah u awooday inuu diirada saaro walxaha aan la daahin. Shakaalka laba keli ah ee aan ka hadlayo kamaradaydu waa inaanan garaaci karin 4K video muddo ka badan 5 daqiiqo mana dhici karo sawirro RAW, adigoo isticmaalaya app camera app.
Maalmahan kamaradaha horay ujeeda waxay u muuqdaan kuwo muhim ah sida kamaradda guud ee soo wajahda, iyo dareeraha kamaradaha labaad ee Galaxy S6 ma niyad jabin. Waa 5-mitar oo dareere ah, kor u kac weyn oo ka timaadda soo-saaraha, iyada oo leh falejo f / 1.9, Real-Time HDR, Low Light Shot, iyo 120-degree qolfaha-ballaaran leh. Sida kamaradda gadaal u jeedda, kamaradda horay ujeeda waxay leedahay qaab cajiib ah oo muuqaal ah. Tusaale ahaan, faleebo f / 1.9 wuxuu iigu ogolaanayaa inaan helo sawiro dhalaalaya, muuqaal fiiqan oo leh xaalado yar-yar, Hoosada Yar ee Low Light ayaa muuqata farabadan oo sawir ah hal sawir oo isku daraya si ay u sameeyaan muuqaalka ugu quruxda badan, iyo xagal ballaaran Lens-iga ayaa iga caawiya inaan ku daro dad badan oo ku jira isdaba-marinta heer caalami ah.
Tijaabinta koobiyada kameradda Galaxy S6 halkan.
Waxqabadka aaladda waa isku-dar ah qalab iyo software. Aynu ka hadalno qalabka ugu horreeya. Ka hor inta aan la bilaabin Galaxy S6, waxaa jiray warar kala duwan oo ku saabsan Samsung oo hoos u dhigtay qalabka gaaska Qualcomm ee ku jira Exynos SoC. Taasi waxay badanaa sabab u tahay arrimaha kulaylka ah ee Qualcomm ee soo socda processor Snapdragon 810. Qaar badan ayaa ka walaacsan tixraaca Samsung Exynos CPUs, sababtoo ah ma aysan ku fiicnayn qalabka shirkadihii hore ee sida Galaxy S4, Galaxy S5, Note 4, iyo in kale. Waxaa laga yaabaa inaad hadda ku fikirayso hadda, ma ku rakibnay qalabkan leh processor-ka Qualcomm? Waxay sameeyeen. Hagaag, badankooda. Waagii hore, shirkadda Kuuriya waxay isticmaashay noocyo badan oo ka mid ah Exynos-ku salaysan dhammaan qalabkii hore ee boorashka iyo sidoo kale dalalka qaarkood, badanaa dalalka Aasiya.
Dhamaadkii, wararka xanta ah waxay u muuqdaan kuwo run ah, Samsung waxay ku beddeleen processor Qualcomm's Processor Snapdragon oo ah Exynos One - Exynos 7420, si sax ah u ah - dhammaan noocyada kala duwan. Waa adduunka ugu horreeya 14nm ku salaysan, 64-bit, processor-octa-core. Iyo, waxaa la isku daray 3GB of LPDDR4 RAM, taas oo 50% ka dhaqsiyo badan LPDDR3 oo wuxuu laba laabaa xajmiga xajmiga; farsamada casriga ah ee cusub ee UFS 2.0, kaas oo bixiya xawaare ka sii akhri iyo xawaalad u socodka gudaha gudaha eMMC 5.0 / 5.1. Haddii aadan fahmin mid ka mid ah arrimahan, waxa macnaheedu yahay in qalabka waa wax cajiib ah, oo awood u leh inuu bixiyo waxqabad aan fiicnayn.
UFS 2.0 ayaa sidoo kale ah mid ka mid ah sababaha aysan jirin wax kaadhadhka microSD ee Galaxy S6, maxaa yeelay waxay isticmaashaa nooc cusub oo ah xakameyn xusuusto oo aan ku habooneyn kaararka microSD. Intaa waxaa dheer, kaadhka microSD wuxuu si aad ah u yaraa akhriska iyo qoritaanka xawaare ka badan marka loo eego UFS 2.0, taas oo keentay in uu keeno wax dhib ah. Ugu horreyn, waxaan ahaa qalbi-jab ah in Samsung ay ka soo bixisay kaadhka microSD ee Galaxy S6, marwalba waxaan u isticmaali jiray inaan qaadno muusikada iyo sawirada maxaliga ah ee 64GB class 10 10 microSD. Sababta oo ah, mar kasta oo aan isticmaalo qalabyada, waxaan si fudud u isticmaali jiray kaadhka microSD ee qalabkii hore oo aan ku geliyay mid cusub. Sidan ayaanan u baahneyn in dhammaan warbaahinta ay ku daabacdo qalab cusub, kaas oo qaadan doona da'da. Si kastaba ha ahaatee, isbeddelkaan ayaa ixtiraamay dhammaan sawirada daruurtii, waxaana u isticmaalay Spotify muusikadayda. Sidii kale duwanaan lahaansho la'aan kaararka microSD, Samsung ayaa keydinta kaydka gudaha ka saartay 16GB ilaa 32GB waxayna bixisaa 1 00GB of cloud of kaydinta on Microsoft OneDrive bilaash ah.
Hadda, dib ugu noqo waxqabadka qalabka. Iyada oo aan loo eegin inta RAM ama naqshadaha CPU ee aad haysato, haddii barnaamijka aan si fiican loo sii fiicneyn, waxay keeni kartaa waayo-aragnimo user xun. Iyo, taasi waa waxa dhabta ah ee ay ka dhaceen shirkadda Kuuriya ee horey u lahaanshaha qalabka kale; qalabka ugu sareeya, oo lagu xidho software wanaagsan oo liisan leh. Markay tidhi, waan ku faraxsanahay in aan kuu sheego in Samsung ugu dambeyntii u suuro galisay in ay tirtirto inta badan sawirada TouchWiz. Ama waxay dhab ahaantii bilowday inay hagaajiso software-ka, ama tan sababtoo ah tiknoolajiyada cusub ee UFS 2.0 ee farsamada. Wax kasta oo ay tahay, waxay sameysay Galaxy S6, smartphone ugu casriyeysan ee Samsung ilaa taariikhda. Qalabka app appace-ka ee loo isticmaalo in uu horey u sii dhigo cusbooneysiinta Android 5.1.1, si kastaba ha ahaatee, ka dib markii cusbooneysiintiisa la tagay. Qalabku si dhakhso ah ayuu u shaqeeyaa, mana jabiyo dhididka inta uu ku shaqeynayo CPU iyo GPU hawlaha ballaaran.
Xaqiiqada, Galaxy S6 dhibaatada ugu weyn waa maaraynta RAM. Nidaamku ma awoodo in uu sii wado codsiyada asalka ah ee xasuusta muddo dheer, sidaas awgeed si joogto ah ayey u dishaa. Sidaas darteed mar kasta oo isticmaaluhu uu furo app, waxay qaadataa waqti dheeraad ah si ay u load, taas oo natiijada abuurtaa lag. Qeybta ugu liidata ee buggani waxay tahay inaanu xitaa ku haynin soo saaraha TouchWiz xasuusta, taas oo ka dhigaysa nidaamka in uu furo bakhtiiyaha mar kasta oo aan riixo badhanka guriga, maadaama ay dilaan LowMemoryKiller (bilayska RAM-ka ee Android). Arrintani sidoo kale waxay masuul ka tahay waxoogaa yar oo ah TouchWiz laguna hayo.
Arrinta waxaa badanaa keena xasuusin xad dhaaf ah, taas oo ah bugta lagu soo bandhigay Android 5.0 Lollipop Google. Inkastoo, Google ay ku adkeeysatay cusbooneysiinta Android 5.1.1, laakiin Samsung version 5.1.1, arrinta weli waa sii socotaa. Waxaan ku eedeyn lahaa Google iyo Samsung labadaba. Waxaan rajeynayaa in shirkadda Kuuriya ay awood u leedahay in ay xalliso dhibaatadan si dhakhso ah, sababtoo ah, marka laga reebo arrintan muhiimka ah, waan ku faraxsanahay Samsung software.
08 ka mid ah 09
Tilmaamaha wacan, Nolosha batteriga
WAXQABADKA HESHIISKA / WAKIILKA
Muhiim maaha haddii smartphone-ga uu qalabaysan yahay batoon aan dhammaad lahayn ama uu la yimaado awoodo badan, haddii aysan habboonayn telefoonnada si wacan, waa telefoon taleefan xun. Nasiib wanaag, Galaxy S6 ma aha telefoonka gacanta xun oo waxaan qabaa wicitaannada telefoonka sida champ. Waxay la timaaddaa sheeko qurxoon oo qumman oo cad iyo laba microfoon. Dhego-joojiyaha labaad wuxuu sameeyaa shaqo aad u wanaagsan oo ah joojinta dhawaaqa asalka ah, qalabkuna wuxuu si fiican ugu fiicnaa meelo qotodheer. Nasiib darro, ma imanayso batari aan waligeed lahayn ama nooc kasta oo awood leh.
Sida horay loogu soo sheegey, shirkadda Kuuriya waxay u wareegtay garsooraha koowaad ee gadaasha dhabarka qalabka ilaa hoose, oo ay weheliso dekedda microUSB iyo nambarka dhegaha. Iyo, waqtigan ku wareegsan, waxay dhab ahaantii ku rakibtay qalabka leh runtii wanaagsan, qaylo-dhaan. Suntu waxay u jajabin kartaa mugga ugu sarreeya, laakiin waxay tixgelinaysaa inay tahay hal-ku-hadlaha keliya, waa gebi ahaanba ganaax - aad uga fiican sidii hore. Si kastaba ha ahaatee, inta aad isticmaalayso casriga ah ee qaabka muuqaalka, gacanta ayaa daboolaya afhayeenka kaas oo run ahaantii runtii dhibsado.
Nidaamka ugu dambeeyay ee Samsung ayaa xiran 2550 mAh lithium-ion batareer, taas oo ah 9% ka yar intii hore, laakiin cayaaraha oo leh muuqaal badan, xajmiga badan oo sarreeya iyo processor sideed dheer oo awood leh. Markaan tixgelineyno baaxada batteriga, waa in aan xitaa ina dhaafin dhowr saacadood, laakiin weli waxa ay maamushaa maalin kasta. Sidee suurtagal ah, waxaad waydiisan kartaa? Waa hagaag, erayga halkan waa: waxtarka. Inkasta oo bandhigga Galaxy S6 uu leeyahay qaabab badan oo pixels ah, processorkuna wuxuu leeyahay afar qaybood oo dheeraad ah, labaduba waxay isticmaalaan tamar ka yar kuwa kale. Waxaa intaa dheer, RAM cusub LPDDR4 RAM iyo keydka UFS 2.0 ayaa ah tamar badan oo tayadoodu sarreeyaan marka loo eego kuwa horay u sii jiray. Shuruudaha fudud, qaybaha qalabyada casriga ahi waa kuwo aad u awood badan, isla mar ahaantiina tamarta si fiican waxtar u leh - waa tan ugu fiican dunida.
Ugu horreyntii, noloshii batteriga ee Galaxy S6 aheyd, waxaan xitaa heli karin maalin dhan hal go'an oo leh 2 / 2.5 saacadood ee shaashadda. Si kastaba ha noqotee, ka dib maalmo yar kadib, waxaan bilaabay inaan arko horumar wax ku ool ah ee waxqabadka bateriga. Mar dambe kuma soo dallacsiin labo jeer maalintii, si fudud ayaa ii sii joogtey maalintii oo dhan 4 / 4.5 saacadood ee shaashada, mararka qaarkoodna waxay ku dhowdahay 5 saacadood. Hadda, ma noqon doonto mid isku mid ah sababtoo ah waxqabadka bateriga ayaa ku xiran gebi ahaan isticmaalka, isticmaalkaaga ayaa laga yaabaa inuu ka sareeyo ama ka hooseeyo mine. Si aad u tixraacdo, adeegsiga dhabta ah ee Galaxy S5, ma aanan helin maalin isticmaalkaas ah, waxaan ku qasbanahay inaan had iyo jeer qaato laba jeer maalintii.
Si aad u hesho lacagaha ugu badan ee dacwadaada, waxaa jira laba nooc oo ah hababka badbaadinta tamarta oo laga heli karo Galaxy S6. Mid ka mid ah habka dhaqangalinta awooddaada dhaqameed, kaas oo xaddidaya waxtarka ugu sarreeya, wuxuu yareynayaa dhalaalka shaashadda iyo qaabka wareega iyo fura nalka muhiimka ah. Midka labaad ayaa ah mid gaar ah, wuxuu ku dabaqaa mawduuca shaashadda fudud ee shaashadda guriga, sidaas awgeed bandhigga AMOLED wuxuu isticmaalaa tamar yar, wuxuu xadidaa tirada barnaamijyada la adeegsan karo, iyo waxyaabo badan oo dheeraad ah u rogaa. Waxaa loo yaqaan 'Ultra Power Saver Mode'. Laguma dhajin karo si toos ah markaad bateriga hoos u dhacdo, halka kan kale uu awoodi karo. Intii lagu guda jiray imtixaankaygu, waxaan arkay horumar weyn oo ku yimid waxqabadka bateriga inta ay awood u leeyihiin.
Si aan kuu xusuusino, Galaxy S6 ma laha batteri la bedeli karo, markaa ma badin kartid hal batteri oo kale, sida aad ku heli lahayd qalabkii hore ee Galaxy (sababtoo ah xayiraadaha naqshadeynta). Sida lacag, Samsung waxaa ka mid ah Fidinta degdegga ah kaas oo ka qaadaya qalabka si 50% 30 daqiiqo, iyo Wireless Sharging kaas oo taageera istaandarada cabirka shaashada iyo Qalabka PMA labadaba, sidaa daraadeed waxa uu ka shaqeeyaa dhamaan siyaabaha cabsida ee wireless. Anigu waxaan ahay taageere weyn oo ah lacag si deg deg ah, waxaan jeclaan lahaa qalabyo badan oo taageeraya tiknoolajiyadaan. Dhanka kale, waxaan ka helaa lacag kufilan wireless si ay u noqoto mid aad u gaabis ah, waxaan jeclahay fikradda ka dambeysa, si aan caadi ahaan u dhamaystirto iskuxiridda fiilooyinka korantada ee kaararka iwm iyo si toos ah u gali telefoonka laftiisa.
09 ka mid ah 09
Iyadoo Samsung Galaxy S6, macaamiisheeda ayaa macaamiisheeda siisay waxa ay doonayaan, inkastoo ay bixinayaan dhowr ka mid ah qodobbada ugu waaweyn ee iibinta ee geedi socodka. Shirkadda Samsung ayaa ah mid aan la mid ahayn wixii aan horey u soo arkay shirkadda horayba, waxa ay ku siisay magaca Galaxy in dib loo furo muddadii dheeraa ee loo baahnaa si ay u noqoto mid ku lug leh warshadaha moobiilka. Qalabku waa isku-dhafan oo cusub, laga bilaabo naqshadda illaa awoodda iyo awooda wax-ku-oolka wax-ku-oolka ah, intooda badani waa dunida ugu horreysa ee casriga ah.
Guud ahaan, shirkadda Kuuriya waxay samaysay shaqo adag oo leh Galaxy S6, waana guusha dhabta ah ee ay horay u soo saartay, Galaxy S5, dhammaan qaybaha oo dhan. Waxaan ku faraxsanahay naqshadeynta iyo dhismaha tayada casriga ah, Waa wax aan dooneynay muddo dheer oo ka soo jeeda Samsung, hadda waa ugu dambeyntii ku qanacsan qiimaha qiimaha xadiidka weyn ee Korantada ee qalabka calaamadda. Iyada oo sida sare, quruxda AMOLED quruxsan, immersion waa la damaanad qaaday. Intaa waxaa dheer, qalabku si fudud ayaa u soconaya maalin dhan oo leh 2550 mAh oo yar yar iyo bandhig muuqaal ah oo leh Quad HD, tani waa arrin dhab ah oo halkaan ah. Sidoo kale, waxaad ka takhalusi kartaa kaamirooyinka istiraatiijiga ah ee hadda, sababtoo ah waxani waxay ku xirantahay dareemayaasha kamaradaysan oo cajiib ah oo leh qaab algorithi ah oo habboon iyo qaabab badan oo software ah oo loogu talagalay ku dhowaadba xaalad kasta.
Sidoo kale waxaan jeclahay Samsung waxa ay samaysay qaabkii ugu dambeeyay ee TouchWiz. Waxay ka kooban tahay waayo-aragnimo macquul ah oo fudud, codsi qurxoon oo loo qurxiyey qaababka, nadiifin iyo sahlan oo fudud, iyo kartida maareynta. Waa wax aad u fiican, ka hor intaan la helin, si kastaba ha ahaatee, weli waxaa jira boos loo fiicnaado. Laakiin, hal shay oo hubaal ah, tani waa nooca ugu fiican ee TouchWiz ilaa taariikhda. Marka la eego waxqabadka, ma haysto wax dhibaato ah, marka laga reebo xakamaynta maareynta RAM, kaas oo aan rajeynayo in si dhakhso ah loo go'aamin doono. Xayawaankani wax walba way fududaan karaan.
Haddii aad ku soo cusbooneysiisay ama aad ka muuqatey dib u eegista telefoonka sare ee qalabka casriga ah, oo aadan ka daalin qalabka aan ku xirneyn batterka isticmaalaha iyo microSD-ka, waxaan kugula talin lahaa inaad hesho Galaxy S6. Waxaad si fudud u qaldan karin waxan, waa mid sahlan mid ka mid ah lacagta casriga ugu fiican ee hadda iibsan kara. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay qof aan isticmaali karin aaladda mobile iyada oo aan lahayn batari laga saaro iyo boos dhexdhexaad ah microSD, ka eeg fiiro LG G4!
Fariin Sheikh raac on Twitter, Instagram, Facebook, Google +.
IPhone 6-aad, Muhiimada
Waa maxay Telefoonka gacanta ama qalabka casriga ah?
Apple iPhone 5C Dib u eegis (4.5 Stars)
Maxay Tilmaameen Tilmaamaha Google?
8 Shirkadood ee ugu wanaagsan LG ee iibsanaya 2018
Taleefannada Mate Huei: Waxa aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Miyuu Lacagta Lacagta Lacagta Laga Qaadi Karo?
Dib-u-eegid: AT & T's-Keyboard-Full-Keyboard, Quick-Screen Touch-Screen
Sidee loo hubin karaa webkaaga hal daqiiqo ama ka yar
Maxay yihiin Dugsiyada ugu Fiican ee Muuqaalka Kumbiyuutarka 3d?
Waxa la Sameynayo Marka Guriga Google uusan ku xirnayn Wi-Fi
Helitaanka Caawinaad Dheeraad ah
Microsoft Day ee Istaraatiijiyada Taariikhda Best St. Patrick's Daybooyinka iyo daabacaadda
Qiyaano Horudhac ah oo Carbeed - Horudhac GTA Advance GBA
Qeybaha internetka laga soo bilaabo dadka dhabta ah
Waa Maxay DST Dukumeentiga?
Ldconfig - Command Linux - Unix Command
Isku-xirka Shabakadda Wireless (Wireless Network) Isticmaalka Windows
Iibinta Kumbuyuutarrada loo yaqaan Windows Movie Maker
DidTheyReadIt - Adeegga Shahaadada ee Shahaadada leh
Sida Loo Sheego Dhibaatadaada Shaqaale Kombiyuutarka PC
Tusaale ahaan isticmaalka qaynuunka Linux "tar"
8-tii ugu fiicnayd ee kombiyuutarada ee iibsada sannadka 2018
Waa maxay FOOM RAF?
Maxay Tahay File INDD?
Sida Loo Isticmaalayo Dareem Dhib ah adoo isticmaalaya 'Khatarta Hubinta'
Xbox Hal Ciyaar Garo Ah: Sida Loo Diro Xilliga Xaadir Lagu Sameeyo Xbox Live
Isku xirka ciyaarta
Dhamaan Tilmaamaha 4aad ee Apple TV
Waa maxay Yahoo? Yahoo 101
8 Website-yada si ay u daabacaan sawirrada Instagram Sawirada
Goorta la Isticmaalayo Taliska SSH ee Linux